प्रकाशक : binod k. Rijal समय : 2:32 PM
Basanta December 1, 2009 at 7:27 AM
भावना मिठो छ!
गजलको संरचनामा भने धेरै मेहेनत आवश्यक देखिन्छ।
मज्जाको गजल लेख्नु भएछ |
अब चाहिँ ति प्रियले बुझ्लिन कि !
Dilip Acharya December 2, 2009 at 5:25 PM
गजलको संरचनागत बिषयमा खासै जानकारी नभएपनि मलाई पनि केही बोल्न मन लाग्यो ।
साथीभाईको हिसाबले आफुले देखेको कुरा लेख्दैछु, अन्यथा नलिनु होला, तर यो "गजल" भने अलि भएन है !। मेरो बिचारमा हामीले सधैं "एकदम राम्रो" वा "गज्जब" छ भन्ने मात्रै कमेण्ट दियौं भने यसले सर्जकको परिष्कृत हुने बाटो रोक्छ ।
बाँकी तपाईको हरफहरुमा गेयात्मकता र मानव संबेदनाका भावहरु भने यथेष्ठ छन भन्न भने करै लाग्छ ।
BINOD K. RIJAL December 4, 2009 at 7:14 PM
धन्यवाद सम्पुर्ण प्रतिक्रयाकाे लागी । विषेशगरी दिलिप सरकाे जस्ताे प्रतिक्रयाकाे म सधै अपेक्षा र स्वागत गर्दछु ।